Filtrer les éléments par date : dimanche, 21 juin 2020
dimanche, 21 juin 2020 20:21
Ambohitompoina - Antanifotsy: Tratra ireo mpanao kolikoly amin’ny fanadiovana omby halatra
Nisy ombilahy roa tsy mazava tazomin’olona ao amin’ny Fokontany Antamiana kaominina Ambohitompoina, Distrika Antanifotsy ny 13 Jiona 2020. Nidina tany an-toerana ireo Zandary ny 14 Jona rehefa nahazo fampandrenesna, nanamarina izany ka tratra ireo omby ireo sy ny olona nitazona azy.
Rehefa nosavaina ny taratasy dia fifanarahana fivarotana omby ny daty 05 sy 06 Aprily 2020 no hita tany amin’ilay olona nitazona ireo omby izay misy ny mpivarotra avy ao Vohitrambo. Rehefa nantsoina anefa ireto roalahy mpivarotra dia nandà mafy fa tsy nivarotra omby tamin’io daty io.
Nanokatra fanadihadiana ny Zandary, ka tamin’izay no tonga ny olona telolahy nitondra vola dimy hetsy Ariary homena ny Zandary mba tsy hiakaran’ny raharaha eny anivon’ny Fitsarana sy hanavotana ilay olona voatazona. Notanana niaraka amin’ireo vola nokasaina hanaovana kolikoly izy efa-dahy ary natolotra ny Fampanoavana. Tazomina am-ponja vonjimaika izy ireo.
dimanche, 21 juin 2020 20:13
Saranambana-Fenoarivo Atsinanana: Lavanila maitso 77,200kg nopotehina
Lavanila maitso milanja 77,200kg no tra-tehaky ny Fokonolona niaraka tamin’ny tompony tao Ambodilaitra Kaominina Saranambana ny 12 jona lasa teo. Novidiana ny 75kg tamin’ireo, ary lavanila halatra ny 2,200kg. Tsy mbola fisokafan’ny taom-piotazana no nahitana ka nanagiazana ary namotehana an’ireo lavanila ireo.
dimanche, 21 juin 2020 16:20
Manakambahiny Andrefana: Dahalo iray matin’ny Fokonolona
Dahalo telo lahy nitondra basim-borona no nikasa hangalatra omby miisa 25 tao Berombaza/Ilakana Fokontany Ambalavato, Kaominina Manakambahiny Andrefana, Distrika Ambatondrazaka ny alin’ny 18 hifoha ny 19 jona 2020. Nanohitra ny Fokonolona, nisy ny fifandonana sy fifanenjehana. Matin’ny Fokonolona nandritra izany ny iray tamin’ireo dahalo, raha toa ka vaky nandositra ny ambiny.
Dahalo raindahiny ity maty ity, ary efa nigadra tao amin’ny fonjan’Ambatondrazaka. Efa nalain’ny havany ny faty taorian’ny fanamarinana nataon’ny mpitsabo sy ny Zandary. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny Zandary mikasika ity raharaha ity.
dimanche, 21 juin 2020 14:31
Sahamamy- Amparafaravola: Omby 4 lasan’ny dahalo, olona iray maty notifirin’ny dahalo
Notafihin’ny andian-dahalo mitam-basy tao Sahamamy Distrika Amparafaravola ny alin’ny 15 jona 2020. Omby miisa efatra no lasan’ny dahalo. Nisy lehilahy iray maty notifirin’ny dahalo nandritra ny fanafihana. Nanao fanarahan-dia nifanampy tamin’ny Fokonolona ny Zandary vao nahazo fampilazana.
Tany Androfiamaty 5km atsimo andrefan’i Sahamamy no tratra ireo omby, saingy efa novonoin’ny dahalo ny iray. Efa tafaverina amin’ny tompony ireo omby na ny velona na ny maty.
dimanche, 21 juin 2020 14:10
Lalàna mifehy ny Serasera: Lany nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona
Lany nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona ny zoma 19 jona 2020, nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina, ny Volavolan-dalàna laharana faha-004/ 2019 tamin’ny 02 oktobra 2019 izay mikasika ny lalàna mifehy ny Serasera .
Miisa sivy (9) ireo fanitsiana noentina teto anivon’ny Antenimierandoholona tamin’ity volavolan-dalàna.
Anisan’izany ny fandrarana ny famoahan’ny mpanao gazety ny adihevitra, ny tatitra na zavatra hafa tapaka tamina fivoriana tsy azo atrehin’ny besinimaro eo anivon’ireo Andrimpanjakanan’ny Repoblika, fanovana izay nampidirina tao amin’ny andininy fito vaovao, andininy faha 6 amin’io volavolan-dalàna io.
Teo ihany koa ny fanovàna izay nampidirana tao amin’ny andininy faha 55-bis vaovao, andininy faha 23, izay mamaritra ny fomba firafitra sy fomba fiasan’ny biraon’ny Holafitry ny mpanao gazety izay nankatoavan’ireo Loholon’i Madagasikara fa fidiana amin’ireo mpanao gazety mpikambana voasoratra ao ihany ireo mpikambana mandrafitra ny Holafitry ny Mpanao gazety, izany moa no natao mba hampirindra ny asa sahanina ao.
dimanche, 21 juin 2020 13:35
FID et TI-MG: Partenaires pour la transparence, la redevabilité et l’anti-corruption dans la lutte contre la Covid-19
Le FID – Fonds d’Intervention pour le Développement et l’association TI-MG, Transparency International – Initiative Madagascar, sont désormais partenaires pour la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption. La signature de la convention qui scelle cette collaboration a été effectuée vendredi 19 juin 2020 à Anosy dans les bureaux du FID.
L’objectif est de travailler ensemble pour lutter contre la corruption dans les activités de protection sociale relevant de la responsabilité du FID. Les deux institutions se sont aussi engagées mutuellement à promouvoir la transparence et la redevabilité. Dans le cadre de cette collaboration, des échanges ainsi que des partages d’expertise et des supports de communication sont prévus entre les deux parties.
Tonga tao amin’ny Akany Ambatolampy nitondra fanomezana ho an'ireo zaza kamboty beazina ao ireo lehiben'ny Polisim-pirenena izay notarihin'ny Minisitry ny filaminam-bahoaka CGP Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys amin’izao andro fankalazana ny fetin'ny Ray izao ho fanehoana fa manana Ray aman-dreny mitaiza izy ireo na dia lavitry ny fianakaviana aza. Nahazo bodofotsy sy vary ary arendrina avy any amin'ny Ministeran'ny filaminam-bahoaka izy ireo.
Nitondra fanampiana toy ny sakafo sy akanjo ary kojakoja maro samihafa (savony, koveta,...) hanampiana ny ankizy amin'ny fiainany andavan'andro ihany koa ireo mpiara-miasa hafa toy ny FIVAPOVA avy ao amin'ny Commissariat Central. Tao ihany koa ny sampana "Soatia" izay nanome "Masque" miisa 200 sy lamba firakotra miisa 30. Ankoatra izay dia nanome baolina basket sy foot ihany koa ny depiote voafidy tao Ambatolampy.
Nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo tamin'ireo ankizy miisa 69 moa ny lanonana.
Nitohy ny fandraisana an-tanana ny fanaraha-maso sy fanadihadiana ireo vehivavy Malagasy miisa 176 nody an-tanindrazana avy any Koweït izay napetraka ao amin’ny « Domaine St François » sy teny amin'ny « La Villa Verte » samy eny Ambatomirahavavy.
Notolorana "kits de dignité" misy ireo kojakoja ilaina amin’ny fidiovana sy fahadiovana izy 176 mirahavavy, izay fiaraha-miasa teo amin'ny Minisiteran'ny Mponina, ny Fiarovana ara-tsosialy sy ny Fampiroboroboana ny Vehivavy sy ny UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population), OIT (Organisation Internationale du Travail) ary ny OIM (Organisation Internationale pour les Migrations).
dimanche, 21 juin 2020 11:45
Rapatriement: 124 ressortissants Mauriciens rentrent chez eux
Après le débarquement des 130 passagers Malagasy en provenance de Maurice, hier, l'avion d'Air Mauritius a embarqué 124 ressortissants Mauriciens pour les rapatrier dans leur Pays.
(Source: Ravinala Airports Madagascar)
dimanche, 21 juin 2020 11:40
21 juin: Journée Mondiale du yoga.